Inkqubo entsha ka-Apple yokutshintsha i-iPhone 6s | Iindaba zeGajethi
Kwiveki ephelileyo besele sibhengeza isicwangciso sokutshintsha ikhusi le-Apple iPhone 6 Plus kodwa ngomahluko ngokwezicwangciso eziqhelekileyo zenkampani. U-Apple wongeze i Inkqubo yokutshintsha isikrini yezi iPhone 6 Plus Intlawulo yangaphambili yomsebenzisi ochaphazelekayo. Ngeli thuba, ukuba ngaba yinto "yesiqhelo" yokutshintsha okanye yokulungisa kwi-firm kwaye i-iPhone 6s icime yodwa ukusilela kuqatshelwe yinkampani uqobo, iindleko kumsebenzisi zero.
Kunzima ukuyiqonda kwabaninzi kuba iyinkqubo yokulungisa okanye yokutshintsha kwenye yomibini imeko, kodwa kwi-iPhone 6 Plus u-Apple uthi oku kusilela kubangelwe kukuwa kwezixhobo kwaye oku ngokucacileyo akunakugutyungelwa yile waranti yemveliso njengoko yingxaki yokusetyenziswa. Ngayiphi na imeko banako kudluliswa i-imeyile okanye inqaku langaphakathi kwiivenkile zakwa-Apple kwaye yazise i-Genius ukuba akukho ngxaki ekulungiseni le mpazamo kodwa indleko yale yi x euro.
Kodwa ke, inqaku kukuba kwimeko ye-iPhone 6 kunye nebhetri yayo Ewe yingxaki kwezinye iibhetri ezenziwe phakathi kukaSeptemba ukuya ku-Okthobha u-2015 banokuba nale ngxaki. Ngesi sizathu, iApple ivula le nkqubo ukuba ibuyisele ezi bhetri zabasebenzisi abachaphazelekayo, yiya kwiVenkile yeApple ekufuphi okanye umthengisi osemthethweni kwaye unokucela ukulungiswa kwe-iPhone yabo ngaphandle kweendleko.
Kule meko inkampani yongeza imali kubo bonke abo bantu babekhe batshintsha ibhetri ngaphambili ye-iPhone 6s yakho kule ngxaki. Ke ukuba ungomnye wabo bachaphazelekayo kukusilela, ingcebiso kukuba uyixele ngokunxibelelana neApple ngokuthe ngqo okanye kuyo icandelo lewebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » INkqubo eNtsha yokuTshintsha iBhetri ye-Apple kwi-iPhone 6s
Umxube weXiaomi Mi ubonakala umhlophe kwimifanekiso elihluziweyo